Thwebula Ask.fm 4.2.2 – Vessoft
Ask.fm – client of network popular social imibuzo nezimpendulo. Ask.fm ikuvumela ukuba ucele ngumuntu ongaziwa noma egameni lakho siqu noma imiphi imibuzo kwabanye abasebenzisi bese uphendula counter-umbuzo. Isofthiwe kwenza ukuba ubhalisele kubasebenzisi ezahlukene kanye ukubuka noma ukuhlola izimpendulo imibuzo. Ask.fm ikuvumela ukuba unamathisele ezahlukene izithombe, links nezithombe imibuzo. Futhi isofthiwe isekela search abangane ezibhalisiwe kwezinye amanethiwekhi omphakathi. Ask.fm kwenza kakhulu ukonga traffic futhi ine interface yomsebenzisi-friendly.
Amandla ukubuza imibuzo engaziwa
Izaziso Pop-up ngemibuzo emisha
Ukubhalisa amaphrofayli zabanye abasebenzisi
Ukunamathela izithombe imibuzo
Ukuxoxa ethandwayo amanethiwekhi omphakathi
Amazwana on Ask.fm:
Ask.fm Ahlobene software:
English, Español, Português, Italiano... Bona software xaxa